“हिमालमा पुगेपछि बिहेको प्रस्ताव राख्नुभो, मैले हुन्छ भनिदिएँ” – इन्दिरा – Sandesh Press
September 24, 2021 333
काठमाडौं। गायिका इन्दिरा जोशीले प्रेमी शरद केडियासँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन्। बिहीबार खुम्बु पुगेर उनीहरुले इन्गेजमेन्ट गरेका हुन्।
हेलिकप्टरमा खुम्बु पुगेका उनीहरूले उत्रिनेबित्तिकै इन्गेजमेन्ट गरेका थिए। खुम्बु पुगेपछि शरदले प्रपोज गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हिमालमा पुगेपछि उहाँले मलाई प्रपोज गर्नुभयो। मैले हुन्छ भनिदिएँ।’
इन्दिरा र शरद लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। सार्वजनिक रुपमा इन्दिराले आफू प्रेममा भएको बताए पनि कोसँग भन्ने खुलाएकी थिइनन्।काठमाडौं, ७ असोज-नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजदूत फिर्ता बोलाएकोमा आक्रोश पोखेका छन् । आफ्नो भाग पुर्‍याउन, कार्यकर्ता भर्ती गर्न योग्य काबिल राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको आरोप लगाए । ‘राम्रो काम गरिरहेका, विशेषज्ञ, पिएचडी, बेस्ट एम्बेस्डर अवार्ड पाएका राजदूत फिर्ता गरेको छ । किनभन्दा आफ्नालाई भाग दिनुपर्‍यो । पठाउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।
‘जापानको महामहिम पनि फिर्ता बोलाए छ । उहाँ अबको ७ दिनभित्रै फर्किनै पर्थ्यो । हामीले केही समयका लागि समय थपेका थियौ । त्यो सकिँदै थियो । तर, पक्षपात गरेको छैन भन्ने देखाउन आफ्नोलाई पनि फिर्ता बोलायौं रे । कस्तो छलि कुरा ? पहिले नै तय भइसकेको कुरा, सेप्टेम्बर फिर्ता आउने कुरालाई फिर्ता भनेर ल्याएर जनता झुक्याउने ? यो केटाकेटी खेल हो ? जनता झुक्याउन अब सकिँदैन,’ उनले भने ।ओलीले ‘एमालेको दुई वर्ष सरकार टिक्ने हो भने विचराहरूको सटर बन्द हुन्थ्यो, घ्यार्र सटर बन्द । राजनीतिक सटर बन्द हुन्थ्यो’ त्यसैकारण हटाएको आरोप लगाए ।
Prevजर्मनबाट नेपाली प्रेमिकालाई भेट्न आएका नागरिक ठमेलमा मृत फेला
Next४ महिने बच्चाको यस्तो बि जोग,गर्ववती श्रीमती कु टेर श्रीमान फ रार (भिडियो हेर्नुस्)
आज कुन स्थानमा हुँदैछ भीषण बर्षा? मौसम बिभागले दियो यस्तो चेतावनी